Sweden in aad shaqo ka hesho waxay ku xirantahay inta qof aad taqaano | Gaaloos.com
Home » galmada » Sweden in aad shaqo ka hesho waxay ku xirantahay inta qof aad taqaano
Sweden in aad shaqo ka hesho waxay ku xirantahay inta qof aad taqaano
Sida aan wada ognahay way adagtahay in shaqo laga helo Sweden, qaasatan haddii aad tahay qof soo galooti ah oo aanan aqoon dad badan. Shaqooyinka inta badan ayaa lagu helaa inta qof aad taqaano, iyadoo si hoose dadka is-yaqaana ay isku shaqaalaysiiyaan. Balse su’aashu waxay tahay sidee ayaad ku baran kartaa dadka muhiimka ah ee shirkadaha maamula?
Taasi ayaa waxaa hadda kaa caawinaya shirkad lagu magacaabo Diversitas oo abuurtay barnaamij muhiim ah oo ay isugu keenayaan dadka shaqo doonka ah iyo maamulayaasha shirkado gaaraya 2000. Taasi oo kuu sahlaysa in aad xiriir la samaysato dadka sameeya go’aamada shaqaalaynta ee shirkadaha yaryar iyo kuwa waaweyn ee Sweden.
Shirkada Diversitas ayaa la shaqaysa xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen) qaasatan barnaamijka lagu magacaabo Stöd och matchning. Haddii aad ka qorantahay xafiiska shaqada ayay shirkada Diversitas bilaash kugu caawinaysaa, iyagoo kaa saacidaya in aad barato dadka muhiimka ah ee shaqada ku siin kara isla markaana kuu diyaarinaya wareysiga shaqada iyo CV qurxoon.
Haddaba haddii aad ka qorantahay Arbetsförmedlingen, waxaad soo dooran kartaa shirkada Diversitas, adiga oo la xiriiraya gacanyarahaaga. Aqoonsiga shrikada Diversitas ee Arbetsförmedlingen waa KA: 10046001.
Title: Sweden in aad shaqo ka hesho waxay ku xirantahay inta qof aad taqaano